West Bank Crawl No. 7 #WestBankBits – Welcome to the West Bank!
Warka waa mid xun. Qaboobaha ayaa soo socdo. Soo ma doonaysid in aad banaanka aadid oo waqtigaaga ku istareexda?
Marka – waxaan ku heynaa qorshe fiican ee crawlka West Bank soo socdo!
Casho Mango Factory
West Bank waxaa lagu yaqaan cunto oo kala duwan – Itoobiyan, Hindi, iyo kuwa kale oo badan. Ma ogtahay in aad ka heli karto sushi *cajiib ah* West Bank? Na gala soo qeyb gal casho maqaayada Mango Factory oo ka mid ah maqaayadaha ku cusub West Bank!
233 Cedar Ave S
The Clip & Bits show oo Corner Bar –
Waa show. Show majaajillo. Oo qeybo badan leh. Iyo clips.
Show wuxuu bilaabmayaa 8pm.
Markaasaa dhamaadka habeenkii, nalagu soo biiro mid ka mid ah meelaha aannu ugu jecel nahay West Bank – Republic!
Republic MN * 7 Corners
Parking wuu fudud sida lagu helo rampka 7Corners, ee ku xigo Courtyard Minneapolis. Ama – dhammaan meelaha waxee u jiraan talaabooyin yar tareenka Green Line ka – soo qaado tareenka!
Mango Factory waxee casho u furan tahay habeenkii oo dhan, Clip & amp; Showka majaajillo wuxuu bilaabanaa 8 habeenimo, iyo Republic wuxuu furan yahay ilaa 1da habeenimo (oo happy hour bilaabo 10 – 12 habeenimo!)
Ha illoobin inaad rasiidka iyo jeegagga heysatid! Marka aad tustid jacayl yar oo ganacsatada West Bank, waxaad dib ugu guuleysan kartaa jacayl yar.
U dir nuqul ka mid ah rasiidka aad wax kaga iibsatay ganacsiyada West Bank inta u dhaxaysa September 2, 2014 iyo October 31, 2014 crawl@thewestbank.org si aad gashid bakhtiyaanasiibka aad ku guulaysan kartid habeen oo West Bank! Habeen kaaga oo xiiso leh waxaa ka mid ah: $ 50 shahaado hadiyad oo Republic (7 Corners), labo tikidh oo showyada usoo socda Theatre in the Round, iyo habeen aad joogaysid Courtyard Minneapolis. Abaalmarinta kale waxaa ka mid ah: T-shirtka Mixed Blood Theatre, $ 10 kaarka hadiyadda oo Met Transit, iyo West Bank Love t-shirts.
Ka qayb qaado in mid ka mid ah crawlka habeenkii khamiista iyo rasiidka goobahaas iyo dhacdooyinka waxeey uqalmaan doonaa Labo fursad.